SONATA-CANTATA: ဌာန်၊ ကရိုဏ်း၊ ပယတ်နှင့် နိုင်ငံတကာ ပါဠိအသံထွက်
သိမ်းထားရမယ့် မှတ်သားစရာ post ကောင်းလေးပါ...
သိပ်ကောင်းပါတယ်။ အသံလေးတွေပါ ထည့်ပေးနိုင်ရင် ထည့်ပေးဖို. တောင်းဆိုပါရစေ။ လုပ်နိုင်သူတွေဖြစ်နေလို့ပါ။
အခုမှ ဒီဘလော့ကို ဖတ်မိတယ်။
အလွန်အဖိုးတန်သော စာတွေကို တင်ပေးတာမို့ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
အလွန်တရာ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ပို့စ်ပါခင်ဗျာ ...
ဒီအတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကိုဧရာ့ လက်ရာဖြစ်မလား မသိဘူး။
You arealinguist....Ko Ayar.
၁၀တန်း မြန်မာစာ မဟုတ်လား